Frequently asked questions for travellers - isiXhosa | Covid-19 Response
Frequently asked questions for travellers - isiXhosa
Ndiza kuya phesheya. Yintoni emandiyenze ukuze ndihlale ndikhuselekile?
Akukho mntu uvunyelwayo ukungena okanye ukuphuma aye kwelinye ilizwe ngeli xesha lokumiswa-ngxi kwezinto, ngoko ke akukho mntu uya kukwazi ukuphuma ngaphandle aye kwelinye ilizwe. Nceda hlala ekhaya.
Ndingumkhenkethi osuka kwamanye amazwe ndilapha eMzantsi Afrika - kufuneka ndithini ngelixesha lokumiswa ngxi kweentshukumo (Alert Level 5) okanye Alert Level 4?
Ukuba ungumkhenkethi ofike apha eMzantsi Afrika phambi, okanye emva kokuminswa ngxi kweentshukumo, yaye uselapha eMzantsi Afrika, kufuneka uhlale endaweni yakho yethutyana apha eMzantsi Afrika ngelixesha lokumiswa ngxi kweentshukumo.
Ngexesha ufika apha eMzantsi Afrika mhlawumbi kuye kwafuneka ukuba uskrinelwe iCovid-19 yaye uyokugcinwa bucala uhlaliswe wedwa.
Ngaphandle koku kungentla kungavunyelwa ngenxa yalenjongo yokufuduswa kwabakhenkethi bamanye amazwe apho kwenziwe amalungiselelo, kuquka amalungiselelo wokufudusa abakhenkethi bamanye amazwe behanjiswa ngenqwelomoya, oko sele kulungiselelwe ngabameli lizwe elo abaligqiza elijongene nalomicimbi. Ngexesha lokufudusa abakhenkethi kufuneka bakhatshwe ukuyakukhutshwa kwindawo yokuphuma apho kungafuneka ukuba baskrinelwe i - Covid-19 kwakhona.
Ukuba ndifuna ukungena eMzantsi Afrika ngenjongo yokufumana unyango olukhawulezileyo lwemeko emandundu nexhalabisayo - ingaba ndiya kuvunyelwa ukuba ndingene kweli lizwe?
Ungavunyelwa kuphela ukungena eMzantsi Afrika xa kufuneka ufumene unyango olungxamisekileyo lwemeko emandundu nexhalabisayo ukuba uMphathiswa weMicimbi yezeKhaya, okanye isigqeba sabo, sikunika imvuma ukuba ungene.
Ndibuya phesheya kweelwandle, kufuneka ndenze ntoni?
Nawuphi na umntu ofika eMzantsi Afrika ovela nakweliphi na ilizwe langaphandle kufuneka azigcine endlwini iintsuku ezili-14.